I-Ulefone Armor 5, iselfowuni eyomeleleyo nenotshi, ibhengezwe ngokusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UAron Rivas | | Izaziso, Ulefone
Ulefone ubhengeze iArmor 5, iselfowuni eyomeleleyo eza kufika nenoveli engazange ibonwe ngaphambili kwizixhobo zokumelana eziphezulu kolu luhlu: inotshi.
Oku kubandakanya inoveli enomdla kakhulu, kuba inotshi, nangona ifunyenwe kwizixhobo ezisezantsi, ijolise, ngakumbi kunayo nayiphi na into, phakathi kuluhlu oluphakathi kunye neefowuni eziphezulu, hayi kwiitheminali ezinamagingxi-gingxi.
Isixhobo se-Ulefone 5 sixhotyiswe ngescreen esifana neso-iPhone X ukuba sithetha ngenkangeleko. Le yi-5.85-intshi 1.520 x 720-pixel HD + ene-18.9: 9 umlinganiso wezinto kunye nenotshi ephezulu. I-bezels ezibhityileyo, ezigcinwe kuyo, zivumela ukuya kuthi ga kwi-91% yomyinge wescreen-to-body kwaye, ngokokhuseleko lwayo, ligutyungelwe yiCorning Gorilla Glass 4.
Ineprosesa yesibhozo esisiseko ye-Mediatek MT6763 kwi-2.0GHz ehamba ne-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcinwa kwangaphakathi eyamkela ukwandiswa nge-microSD ukuya kuthi ga kwi-256GB. Kuza ne-16MP + 5MP ukuseta ikhamera ngasemva kunye ne-13MP yangaphambili inzwa enye, kunye nebhetri enkulu ye-5.000mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Okokugqibela, inesifundi somnwe esibekwe phantsi kweekhamera zangasemva, kunye nenkxaso yokuvula ubuso, i-NFC, kunye neGoogle Pay nge-Android 8.1 efakwe ngaphambili.
Ngokubhekisele kwiimpawu zayo zokusinda, iza i-IP68 eqinisekisiweyo, oko kuthetha ukuba inokuqhuba kwiindawo ezininzi ezingaphandle kakhulu, ezinje ngemvula enkulu, udaka, phakathi kwabanye. Ngapha koko, ilayishwe kwangaphambili kunye neeapps ezininzi kubandakanya ikhampasi, isibane, inqanaba, ukuxhoma umfanekiso, isilinganisi sokuphakama, iglass yokukhulisa, ialam kunye nomgca wokulungelelanisa.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Ulefone Armor 5
Esi sixhobo sabhengezwa ngo-Agasti 6, umhla esinokuyifumana ngayo kwintengiso. Ixabiso layo alikaqinisekiswa okwangoku, kodwa njengoko umhla usondela, okanye ngokuchanekileyo kusuku lokumiliselwa, siya kwazi.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nemveliso, ndwendwela i- iwebhusayithi esemthethweni yenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Ulefone Armor 5, iselfowuni eyomeleleyo nenotshi, ibhengezwe ngokusesikweni
Eyona miyalelo iluncedo yelizwi kuMncedisi kaGoogle wosuku elunxwemeni